परस्त्रीसँग अवैध सम्बन्ध राख्दा राख्दै काँग्रेस सभापति पक्राउ – PathivaraOnline
Home > समाचार > परस्त्रीसँग अवैध सम्बन्ध राख्दा राख्दै काँग्रेस सभापति पक्राउ
काठमाडौँ, १८ साउन । परस्त्रीसँग अवैध सम्बन्ध राखेको अभियोगमा अछामका एक काँग्रेस कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–६, का काँग्रेस वडा सभापति मोहन रावल पक्राउ परेका हुन् । उनलाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
उनले सामुदायिक सिकाई केन्द्रकी एक कर्मचारीसँग अवैध सम्बन्ध राखेको अभियोग छ । ती महिलाका श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा भारतको पुनेमा रहेको बुझिएको छ ।ती महिला रावलकी काकी नाता पर्ने बुझिएको छ ।
उनीहरु दुईजनाबीच भएको अन्तरंग कुराकानी बाहिरिएपछि यसको रहस्य खुलेको हो । उनीहरुबीच भएको अन्तरंग कुराकानीको अडियो सार्वजनकि भएसँगै रावललाई विनायक प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुबीच भएको कुराकानीको ६ मिनेट २९ सेकेण्ड लामो अडियो अहिले भाइरल भएको छ ।
दैनिक नेपाललाई प्राप्त अडियोमा उनीहरुबीच केहीदिन पहिले र शारीरिक सम्बन्ध भएको र केहीदिनपछि फेरि ‘भेट्ने’ सल्लाह भएका देखिन्छ ।
फोनमा रावलले ‘आज आउँ कि के गरम भन’ भनेका छन् । जवाफलमा ती महिलाले ‘खाट बेस्सरी चु**उँछौ भनेकी छन् । यस्तै, ‘आज सन्चो पनि छैन । पहिरो जाला, बाटो अफ्ठेरो छ, चार/पाँच दिन पर्खेउ’ भन्ने जवाफ दिएकी छन् ।
साथै, दुई/तीन दिन रोपाईँमा व्यस्त हुने भएकाले त्यसपछि भेटौँला भन्ने महिलाको प्रस्ताव गर्छिन् ।यस्तै, ती महिलाले ‘घर (पत्नी)लाई फोन गर्यौ कि नाइँ कि छोड्देउ ?’ भन्दै जिज्ञासा समेत राखेकी छन् ।उनीहरुबीच ती महिलाले भारतबाट पतिले पैसा पठाएको विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।४०/५० बजार पैसा पठाएको र निकाल्न जान नपाएको तथा उताबाट मेसेन्जरमा नम्बर पठाइदिएको ती महिलाले उल्लेख गरेकी छन् ।
कसरी बाहिरियो अडियो ?
स्रोतका अनुसार ती महिलाको मोबाइलमा अटो रेकर्ड सिस्मट थियो । जसका कारण उनीहरुबी भएको कुराकानी रेकर्ड भयो ।चार्जमा लगाएको मोबाइल ती महिलाका देवरले खोलेर हेर्दा अन्तरंग अडियो फेला पारेका थिए । त्यसपछि घटना बाहिर आएको हो ।दैनिक नेपालसँग सुरक्षित अडियोलाई गोपनियताका कारण हुबहु यहाँ राखेका छैनाैँ ।
बिप्लव समूहको यस्तो खतरनाक कदम! असई बिरूद्ध इन्काउन्टर गर्ने चेतावनी
मलेसियामा सडक दुर्घटनामा परि २ नेपालिको मृत्यु (हेर्नुस दुर्घटनाको तस्बिर सहित)
३ करोड नेपालीको ढुकढुकीमा रहेको रबि लामिछानेको आयो यस्तो दुखको खबर , अब के होला ? हेरेर अवस्य शेयर गर्नुहोला !
बिराटनगरका यी स्माट चोर, दिउसै सबैका अगाडि चो री गर्ने यिनको कला देखेर सबै च कित